Ifayibha Laser Ukumakisha Machine abazo-10/20/30/50 - China Dongguan Glorystar Laser
Fiber Laser Ukumakishwa Machine abazo-10/20/30/50
Product Amanqaku Uzuko laser luphuhlisa kwaye uvelisa umoya olupheleleyo okupholisa inkqubo yokumakisha Fibre Optical Laser e China. Kuyinto unobubele, ukuselwa ephantsi zokusingqongileyo, ngokupheleleyo ngokuzenzekelayo yaye inkqubo laser. Le nkqubo laser yokuyila yenza woqondo conversion izinga ukuya kwi-38% -50%. Umoya Ukupholisa ikwazi ukukhawulelana neemfuno nkqubo. Le nkqubo laser yi ubungakanani encinane kunye yomlinganiselo. imveliso Fiber, ungakwazi eguquguqukayo kwenza inkqubo processing 3D. I umva isolator ezibonisa, esebenzisa particularit ...
Order Ubungakanani: 1SET
Uzuko laser ivelisa ize ivelise inkqubo yokumakisha epheleleyo Ukupholisa umoya Fibre Optical Laser e China. Kuyinto unobubele, ukuselwa ephantsi zokusingqongileyo, ngokupheleleyo ngokuzenzekelayo yaye inkqubo laser. Le nkqubo laser yokuyila yenza woqondo conversion izinga ukuya kwi-38% -50%. Umoya Ukupholisa ikwazi ukukhawulelana neemfuno nkqubo. Le nkqubo laser yi ubungakanani encinane kunye yomlinganiselo. imveliso Fiber, ungakwazi eguquguqukayo kwenza inkqubo processing 3D. Le isolator ngasemva abonisa, esebenzisa ngeenkcukacha of ombala kunye nolwalathiso lwe laser, kunye nesakhiwo ekhethekileyo ngaphakathi umva isolator ebonisa zinokuyithintela le laser libonakaliswe piece umsebenzi ukunqanda laser nghena laser oscillator kwakhona ukuba umonakalo i-laser oscillator.
amaqhosha bukhanye zeplastiki, IC iitshiphusi, amacandelo imveliso digital, ngqo oomatshini, izacholo, xa zishishina zisithengisela nesempilweni, umlinganiselo nokusika izixhobo, iiglasi iwotshi, izixhobo zombane, izakhi-elektroniki, izincedisi kwimpahla yentsimbi, izixhobo zekhompyutha, amacandelo zonxibelelwano mobile, izahlulo imoto, iimveliso zeplastiki, unyango izixhobo, izinto zokwakha, imibhobho nezinye imveliso eliphezulu-ngqo yokumakisha.
Isinyithi kunye ezahlukeneyo izinto non-ebuntsimbi, aluminium aphezulu lukhuni, oxides, nesingxobo, ukutyabeka, ABS, epoxy resin, i-inki, iplastiki, njl
yemveliso amandla 10% ~ 100% (gqolo ukuba ilungiswe)
yemveliso frequency 20KHz ~ 100KHz (gqolo ukuba ilungiswe)
(8h) uzinzo Power (8h) <± 1% RMS
Focus indawo ubukhulu <0,01 mm
ubukhulu Ukufaniswa 50X50mm 110mmX110mm 175mmX175mm
ubunzulu nangokukrola 1.2mm
speed nangokukrola 800 ezingu standard / yesibini
line ububanzi Minimum 0.012mm
minimum ubuntu 0.15mm
ukuchana Ophindwe 0.003mm ±
operation System WindowsXP / 2000/98
mode apholisayo Ukupholisa Air
Iqondo lobushushu bume operation 15 ℃ ~ 35 ℃
Power imfuneko 220V / wesigaba esinye / 50Hz / <400W
Life of module laser 100000 awa
Previous: 3D Dynamic Focus Series Laser Ukumakishwa Machine GLD-100 / GLD-200 / GLD-350
Okulandelayo: C02 Series Laser Machine Ukumakisha CMT-10/30/60/100
Fibre Laser Ukumakishwa Machine
Laser yokumakisha Metal
Metal Laser Ukumakisha
GLF-10 / 30C On-Line ngomtshini Laser lokuMakisha Machine
Kwi-Line Laser Ukumakishwa Machine GLF-10 / 30C
3D Dynamic Focus Series Laser Ukumakishwa Machine G ...
UV Precision Laser Ukumakishwa Machine UV-3W / 5W / 7W / 10W
C02 Series Laser Machine Ukumakisha CMT-10/30/60/100